» हेटौँडा आईडलको घोषणा आज, कसले मार्ला बाजी ?
हेटौँडा आईडलको घोषणा आज, कसले मार्ला बाजी ?
२९ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०८:५६
हेटौँडा, २९ फागुन । मकवानपुरको हेटौँडामा आयोजित ‘राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलाका अवसरमा आयोजना गरिएको ‘ जिपिएक्स हेटौँडा आईडल’ गायन प्रतियोगिताको नतिजा आज सार्वजनिक हुँदैछ । मेलास्थलमा आज साँस्कृतिक कार्यक्रम पश्चात हेटौँडा आईडल घोषणा हुने बताइएको छ ।
मंगलबार भएको फाईनल भिडन्तमा सुसन शाह ठकुरी, विजय लामा, सुशल तामाङ, दीपक कालिराज र भुवन घलानले आ–आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए । उत्कृष्ट ६ सम्म पुगेकी पारु महरा बाहिरिएसँगै केही प्रतिस्र्धीले भावुक हुँदै आफ्नो प्रस्तुति दमदार रुपमा पस्तुत गर्न सकेका थिएनन् । विभिन्न राउण्डमा सिंगर अफ द डे समेत हुन सफल दिपक कालिराज र सुशल तामाङ पनि उपाधीका दाबेदार हुन् । मकवानपुरको उत्तरी भेगमा भएको विभिन्न प्रतियोगितामा समेत फाईनलमा पुगेका कालिराज र तामाङले उपाधी चुम्ने हकदारका रुपमा आफुलाई स्टेजमा प्रस्तुत समेत गरेका छन् ।
त्यस्तै विजय लामाले पनि आफ्नो दमदार प्रस्तुति दिएका छन् भने हेटौँडामा आयोजित गायन प्रतियोगिताहरुमा धमाकेदार प्रस्तुति दिएका सुसन शाह ठकुरी पनि उपाधीका दाबेदार हुन् । लामा र ठकुरीले पनि स्टेज प्रस्तुति दमदार दिएर निर्णायक र दर्शकलाई आफुतिर सोझ्याउन बाध्य पारेका छन् । यता पहिलो पटक गायन प्रतियोगितामा भाग लिँदै हेटौँडा आईडलको स्टेज उक्लिएका भुवन घलान पनि कम छैनन् । प्रतियोगिताको फाईनलमा पुगेका अन्य प्रतिस्पर्धीको तुलनामा गायन प्रतियोगितामा धेरै कम अनुभव सँगालेका उनले हेटौँडा आईडलको फाईनलमा पुगेर सबैलाई चकित समेत पारिदिएका छन् । सञ्चारकर्मी समेत रहेका उनको सामाजिक सम्बन्ध बलियो भएका कारण उनलाई नै हेटौँडा आईडल भएको देख्न चाहाने पनि प्रशस्तै छन् । साथै उनी आईडलमा दर्शकका माझबाट सर्वाधिक भोट प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धी पनि हुन् ।